Inselelo Izinhlamvu zemali Factory - China Challenge Izinhlamvu zemali Abakhiqizi kanye nabaphakeli
Thola izinhlamvu zemali ezenzelwe wena ngentengo yokuncintisana ngenani eliphakeme elibonakalayo Uhlamvu lwemali ngalunye lwenselelo lunomklamo oyingqayizivele ongowenhlangano eliyimele, njengamagatsha ezempi, amayunithi ngamanye, amaqembu akhethekile kanye nokuthunywa okuthile. Amalungu enkonzo ayaziwa ngokuthuthukisa amaqoqo amakhulu ezinhlamvu zemali eziyinselele ngesikhathi sabo empini. Bazizwa beziqhenya futhi benomuzwa wokuba yingxenye lapho bekhombisa izinhlamvu zemali zabo ezahlukahlukene. Kusukela ngo-1984, ifektri yethu inikeze izigidi zemali yenselelo yenselelo yempi ngokweneliseka okungu-100%, uhlamvu lwethu lwemali lwabelana ngama-90% emakethe yaseYurophu neyase-USA. Izinhlamvu zemali zenselelo zenzelwe ngokuphelele ukufanisa imininingwane yakho ngqo. Ngokuguquguquka kokuklama kweqiniso, ungakhetha izinhlamvu zemali ezizodwa noma ezimbili ezinombala kolunye noma ezinhlangothini zombili. Uma unombono ofuna ukuzama kuwo, wabelane nathi ngawo, sisebenza nawe ukuqinisekisa ukuthi umklamo wakho uyikho konke ofuna ukuba yikho! Imininingwane ● Okubalulekile: i-zinc alloy, ithusi, isiliva elihle kakhulu ● Usayizi ojwayelekile: 38mm / 42mm / 45mm / 50mm ● Imibala: mbumbulu koqweqwe lwawo onzima, koqweqwe lwawo oluthambile noma cha ● Qeda: ukucwebezela / i-matte / i-antique, imiphumela emibili yethoni noma yesibuko, izinhlangothi ezi-3 ezipholisha ● Akukho mkhawulo we-MOQ ● Iphakheji: isikhwama se-bubble, isikhwama se-PVC, ibhokisi le-Deluxe velvet, ibhokisi lephepha, isitendi semali, i-lucite ishumekwe
Izinhlamvu zemali ze-Die Casting Zinc Alloy
Izinhlamvu zemali ze-Die Struck Brass
Isisindo Samaphepha Ngokushumeka Kwezinhlamvu zemali
Translucent koqweqwe lwawo Challenge
Izinhlamvu zemali ze-GEO